EX - ABSDF: သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၂-၂)
ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်းတွင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ယောကျာ်းလေး တစ်ဦး သေဆုံး၊ ၃၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ဖီဂျီမုန်တိုင်း လူ ၂၀ ထက်မနည်းသေ
ကချင်ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ဆက်လုပ်မည်
ဒေလီမြို့က လူ ၁၀ သန်း သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်
IS ဗုံးခွဲမှု၊ ဆီးရီးယား ဆွေးနွေးမှုကို ဖျက်ဆီးဖို့ ရည်ရွယ်
‎မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အချိန်အခါမဟုတ် မြစ်ရေကြီးမှုကြောင့် စားသောက်ဆိုင်တချို့နစ်မြုတ်‬
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မျှဝေခြင်းအစီအစဉ် ရေးမြို့နယ်တွင် လာမည့်အပတ်စတင်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆက်လက်အားပေးကူညီမည်ဟု ဆို
ဖားကန့်တွင် မြေပြိုမှုကြောင့် လူတစ်ဦးသေဆုံး
အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း မိုးဇလထုတ်ပြန်
ကမ္ဘောဒီးယားကျေးရွာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီကူးစက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေး
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ ဆုံပြီး စီးပွားရေး မူဝါဒများကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်း/ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ဒု-ဥက္ကဌများနှင့် တွေ့ဆုံ
မလေးရှားသို့ တရာမ၀င်ခိုး လမ်းမှ သွားနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ထိုင်းစစ်တပ်မှဖမ်းဆီး
ရန်ကုန်-ကျောက်ဖြူလမ်း တောင်ကုတ်-မအီလမ်းပိုင်း ဆန်အိတ်တင်မော်တော် ယာဉ် တိမ်းမှောက်
တိုက်မိုင်းကြောင့် BGF တပ်ကြပ်တစ်ဦး ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရ
၈၈ မျိုးဆက် မနီလာသိန်း အမှုရင်ဆိုင်ရ
အယ်လ်နီညိုအရေး အရေးကြီး အဆိုတင်
ဘရာဇီးတွင် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်(ဒရုန်း) အသုံးပြု၍ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် အား နှိမ်နှင်းမည်
အိန္ဒိယကျေးရွာ တစ်ခုတွင် လက်မထပ်ရသေးသည့် မိန်းမပျိုလေးများကို မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲခွင့် တားမြစ် အောင်မြင်မြို့တွင် စက်ဘီးစီးကလေးငယ် ခရီးသည်တင်ယာဉ်က ဝင်တိုက်မိပြီး သေဆုံး
မီးရထားသံလမ်းပေါ် အရက်မူးပြီးအိပ်နေသူ ရထားကြိတ်သေဆုံး
မင်းပြားတွင် အသက် ၇ နှစ် အရွယ် ကလေးအား မီးရှို့သည့် အဒေါ်ကို အရေးယူ
ရည်းစားစကား လက်မခံသည့် မိန်းကလေးကို ဓားဖြင့်ထိုးသတ်၊ ကိုယ်တိုင် အဆိပ်သောက် သေကြောင်းကြံစည်
တော်ဝင်စင်တာတွင် အမျိုးသမီးတဦးအား ဓားဖြင့်ထိုးသွားသူကို ၎င်း၏မိသားစုများမှ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ လာရောက်အပ်နှံ
ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်းတွင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ယောကျာ်းလေး တစ်ဦး သေဆုံး၊ ၃၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ Posted: 22 Feb 2016 07:23 AM PST
လက်ပစ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများအား ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်လာစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက်)
မနီလာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆူလ်တန် ကူဒါရက် ပြည်နယ် အစ်စပါရမ်ဇာမြို့ရှိ ပွဲတော်တစ်ခုတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ရက်နေ့ ညပိုင်းက လက်ပစ်ဗုံး တစ်လုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ၆နှစ်အရွယ် ယောကျာ်းလေးတစ်ဦး သေဆုံးပြီး အခြား ၃၈ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံအာဏာပိုင်များက ဖေဖော်ဝါရီလ ဖီဂျီမုန်တိုင်း လူ ၂၀ ထက်မနည်းသေ
Posted: 22 Feb 2016 07:14 AM PST
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းက ကျွန်းနိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ Fiji ကို စနေနေ့က အင်အားကြီး မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာမှာ
သေဆုံးသူဦးရေ ၂၀ ထက်မနည်း ရှိသွားပါပြီ။ လိုအပ်သူတွေထံ အကူအညီတွေ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေကလည်း အရေးတကြီး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်း Winston ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Fiji ကျွန်းမှာ နေအိမ်တွေ ပြိုကျပျက်စီး၊ သစ်ပင်တွေ အမြစ်ကနေ ကျွတ်ထွ
Posted: 22 Feb 2016 07:01 AM PST
ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ဆဒုံး၊ ချီဖွေလမ်းခွဲမှာ တားဆီးခံထားရတဲ့ လူထုအခြေပြု မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ဟာ ကန်ပိုက်တီမြို့နယ်အတွင်းက ဘိန်းခင်းတွေကို ဖျက်ဆီးဖို့အတွက် မနက်ဖြန်မှ ဆက်လက်ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆည် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက တားဆီးထားသလို
ဘိန်းခင်းရှင်တွေက လက်နက်ကိုင် ဟန့်တားဖို့ ပြင်ဆင်ထား တာကြောင့် တင်းမာလာမယ့်အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီသတင်းကို တော့ ဗွီအိုအေမြ
Posted: 22 Feb 2016 06:57 AM PST
ဒေလီမြို့က လူ ၁၀ သန်းကျော် သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်နေ။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၊ ဒေလီမြို့က ရေဖြန့်ဖြူးတဲ့ တူးမြောင်းကို အကြမ်းနည်းနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေက ပိတ်ဆို့ ထားခဲ့ကြပြီးနောက် ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့မှာ စစ်တပ်က ပြန်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ဒေလီမြို့က လူ ၁၀ သန်းကျော် အတွက် သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
ဂျာ့တ် လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတ်မြင့် မျိုးနွယ်ဝင်တွေက အစိုးရ အလုပ်နေရာ တွေမှာ ပိုအလုပ်ရဖို့ ဒေလီ
Posted: 22 Feb 2016 06:55 AM PST
ဒမာ့စကတ်မြို့က ဗုံးခွဲမှုတွေ အတွင်း ဒဏ်ရာရသူ အချို့။
ဆီးရီးယားမှာ အခု သီတင်းပတ် အကုန်က အနည်းဆုံး လူ ၁၄၀ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဗုံးခွဲ
တိုက်ခိုက်မှု တွေဟာ တည်ငြိမ်မှုရရေး လုပ်ဆောင်ချက် တွေကို ဖြိုဖျက်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အစွန်းရောက်တွေက တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရုရှားက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာ ဒမာ့စကတ်မြို့ တောင်ပိုင်းက ရှီးယားတွေရဲ့ Sayyida Zeinab ဗလီ အပါအဝင်
Posted: 22 Feb 2016 05:38 AM PST
ယနေ့နံနက်မှစ၍ ဧရာဝတီမြစ်ရေ တိုးမြင့်ခဲ့ရာ မြစ်ဆိပ် ကမ်းနဘေးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော စားသောက်ဆိုင် များ အချိန်မီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
ပြောင်းရွှေ၍ မရသောဆိုင်အချို့မှာ မြစ်ရေတွင်မျောပါ သွားခဲ့သည်ဟု မြစ်ဆိပ်နေသူ ဒေါ်ခေါ်န်ဆန်းက ပြော သည်။
အဆိုပါမြစ်ရေမှာ ညသန်းခေါင်ကျော်အချိန်မှစတင်တိုး မြင့်ခဲ့ပြီး နေ့လည် ၁၂ နာရီက ဒူးဆစ်ခန့်ရှိခဲ့ရာ ယခုည နေတွင် အမြင့် ၁၀ ပေ ခန့်ထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်
Posted: 22 Feb 2016 03:48 AM PST
ရေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စတင်သော မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်လှုပ်ရှားမှုကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရေးမြို့နယ်မှ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့၌ စတင်မည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
အစီအစဉ်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိတို့၏ အသုံးမလိုသော ကျောင်းသင်ခန်းစာ စာအုပ်များ၊ ကိုယ်နဲ့ဝတ်လို့မတော်တဲ့ ကျောင်းဝတ်စုံများ၊ ဗလာစာအုပ်နဲ့ အခြားစာရေးကရိယာစသည့် ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများကို နောင်လာမည့် စာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းတက်ကြမည့်
Posted: 22 Feb 2016 03:44 AM PST
အရှေ့အာရှနှင့် ပစိတ်ဖိတ်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို တိုက်ဖျက်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဆက်လက်အားပေး ကူညီသွားမည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ အက်ဇဲလ် ဗန်ထရော့စင်းဘော့ဂ် က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ် ထပ်မံအတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ အက်ဇဲလ်ဗန်ထရော့စင်းဘော့ဂ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင် အသွင်ကူးပြောင်းမှုအပေါ် ဂု
Posted: 22 Feb 2016 03:42 AM PST
မြေပြိုမှု မကြာခဏ ဖြစ်ပွားသည့် ဖားကန့်မြို့နယ် အတွင်းရှိ မော်လကင် မှော်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မြေပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် မြေတူးယာဉ် ဘတ်ဟိုးမောင်းနှင်သူ တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဘတ်ဟိုး ၂ စီး နစ်မြုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ သတင်းသမားတွေ ပြိုပြီးလို့ ရောက်သွားတော့ လူမသေဘူးလို့ ပြောပါတယ် ။ နောက်ပိုင်း မျက်မြင်တွေကလည်း ပြော ၊ ဌာနဆိုင်ရာတွေလည်း ရောက်လာမှ ဘက်ဟိုး ၂ စီး
Posted: 22 Feb 2016 03:25 AM PST
ရန်ကုန်မြို့တွင်း တစ်နေရာတွင် မိုးများရွာသွန်းနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက် နေ့ (၁၃း၃၀)နာရီအချိန် မိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်များအရ
အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်မှ ရွေ့လျားလာသော လေပွေလှိုင်းများ၏ အရှိန်တို့ကြောင့် (၂၂. ၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၂၉. ၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့အတွင်း အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း မိုးလေ၀သ နှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန မှ သတ
ပုံ - ထောင်ဒဏ် ၂၅နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ဆရာဝန်ကို တရားရုံးထုတ် စစ်ဆေးစဉ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ။ ။ ကမ္ဘောဒီးယားကျေးရွာတစ်ရွာမှာ ရွာသူရွာသား ၁၄ဦး အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရကြောင်းတွေ့ရှိရတဲ့
အတွက် ရာနဲ့ချီတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေက တနလာင်္နေ့မှာ စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ အေအက်ဖ်ပီသတင်းတစ်ပုဒ်အရ သိရပါတယ်။ သည်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာမှာကို တာဝန်ရှိသူေ
ရန်ကုန် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အရှေ့အာရှ နှင့် ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ အက်ဇဲလ် ဗန် ထရော့စင်းဘာ့ဂ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်
တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီး စီးပွားရေး မူဝါဒများကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ ဘဏ်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အရှေ့အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန် နှင့် အမျိုး
Posted: 22 Feb 2016 02:29 AM PST
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ ဖောဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင်
နေပြည်တော်လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်းရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီရုံးခန်း၌ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ၊ ဒု-ဥက္ကဌများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ဒု-ဥက္ကဌများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဥပဒေကြောင်းရာများ မမှားကြရန်၊ မိမိတို့ တာဝန်များကို ထမ်း
Posted: 22 Feb 2016 02:19 AM PST
ယနေ့ မနက် (၉)နာရီအချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းခရိုင် ကရဘူရီ သစ်တောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြတ်ကျော်သွား
နေကြောင်း ထိုင်းရွာသားတွေက သတင်းပေးလာကြတာကြောင့် ထိုင်းစစ်တပ်က သွားရောက် ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းစစ်တပ်ကို တွေ့ မြင်ကြတဲ့ အခါ မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီး ကျန် မြန်မာနိုင်ငံသား (၃၅) ဦးကို (အမျိုးသမီး ၇-အမျိုးသား ၂၈ယောက်) ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Posted: 22 Feb 2016 02:05 AM PST
မအီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှ ၄၃ မိုင်အကွာရှိ မအီမြို့သို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ ထွက်ခွာလာသော ဆန်အိတ်တင် မော်တော်ယာဉ်မှာ ပေ ၈၀ ခန့် အနက်ရှိ ချောက်ကမ်းပါးသို့ ကျဆင်း သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါယာဉ်မှာ ဆန်အိတ် ၁၅၀ ခန့်နှင့် လူ ၅ ဦး တင်ဆောင်မောင်းနှင် လာခြင်းဖြစ်ပြီး ဖောင်းသောင်းရွာ အကျော် လမ်းကွေ့ မအီမြို့သို့ ရောက်ရှိရန်
Posted: 22 Feb 2016 01:59 AM PST
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း
နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ၁၀၁၉ တပ်ရင်းမှ တပ်ကြပ်တစ်ဦးသည် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ပျားပင်ရွာအနီးတွင် လုံခြုံရေးယူနေစဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့ နံနက် ၁၁နာရီကျော်အချိန်ခန့် က မိုင်းတစ်လုံး နင်းမိပြီး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့ကြောင်း တပ်ရင်းမှူး က ကေအိုင်စီသို့ အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ၁၀၁၉မှ တပ်ရင်းမှူးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးစောလိုက်သိမ့်က “တစ်ဖက်ကလူတွေက နင်း
Posted: 22 Feb 2016 01:42 AM PST
၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် မနီလာသိန်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့က ဘုရင့်နောင်ရဲစခန်းက စခန်းမှူးနဲ့ အတူတွေ့ရစဉ်။ Photo: Kyaw Zaw Win/ RFA
၈၈ မျိုးဆက် ငြိ်မ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မနီလာသိန်းကို လာမယ့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်တိုင်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တရားရင်ဆိုင်ဖို့ ဘုရင့်နောင်ရဲစခန်းက စခန်းမှူးက ဒီကနေ့ နေ့လည်က လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြီး အကြော
Posted: 22 Feb 2016 01:39 AM PST
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်။ Photo: RFA
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမယ့်နွေရာသီအတွင်း အယ်လ်နီညို ရာသီဥတုကျရောက်ချိန်မှာ အစိုးရဌာဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ အရေးကြီးအဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းလိုက်ပြီး ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြဖို့ မဲခွဲဆုံးဖြတ် အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
မိတ္ထိလာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမောင်သင်းက အယ်လ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက် မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘရာဇီးတွင် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်(ဒရုန်း) အသုံးပြု၍ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် အား နှိမ်နှင်းမည်
Posted: 22 Feb 2016 01:37 AM PST
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် (ဒရုန်း) တစ်စီးအား မြင်တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- ဆင်ဟွာ)
ရီယိုဒီဂျန်နိုင်းရို၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ မြို့အများအပြားတွင် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် (ဒရုန်း) အသုံးပြု၍ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်၊ သွေးလွန် တုပ်ကွေး အစရှိသည့်ရောဂါတို့ကို ပြန့်ပွားစေသော အေးဒီးစ် ခြင်ပေါက်ဖွားနိုင်သည့် နေရာများကို ရှာဖွေဖျက်ဆီး
ဘရာဇီးနိုင်ငံ ၏ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သ
အိန္ဒိယကျေးရွာ တစ်ခုတွင် လက်မထပ်ရသေးသည့် မိန်းမပျိုလေးများကို မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲခွင့် တားမြစ် Posted: 22 Feb 2016 01:34 AM PST
မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုနေသော အိန္ဒိယနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးများအား တွေ့ရစဉ်
ပေကျင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ ကျေးရွာတစ်ခု၌ လက်မထပ်ရသေးသည့် မိန်းမပျိုလေးများအား မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲခွင့် တားမြစ်ထားကြောင်း ဟိန္ဒူစတန် တိုင်းမ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအမိန့်အား စူရတ်ကျေးရွာ၏ အုပ်ချုပ်သူများက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး လ
အောင်မြင်မြို့တွင် စက်ဘီးစီးကလေးငယ် ခရီးသည်တင်ယာဉ်က ဝင်တိုက်မိပြီး သေဆုံး
Posted: 22 Feb 2016 01:30 AM PST
ကျောက်တံခါးမြို့နယ် အောင်မြင်မြို့အနီး ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်း(လမ်းဟောင်း)မိုင်တိုင်အမှတ်
၁၂၃/၅နှင့် ၁၂၃/၆ အကြား ရွှေဝါထွန်းကျေးရွာအနီးတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ယမန်နေ့ည ၇ နာရီခွဲခန့်တွင် အောင်မြင်မြို့ဘက်မှ ပဲနွယ်ကုန်းဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုကျင်ကောက် (ခ)မင်းလွင်ဦး(၃၃နှစ်)ပဲခူးရပ်ကွက် ကျောက်ကြီးမြို့နေသူ မောင်းနှင်လာသော 1D/ … ဟွန်ဒိုင်းဖြူ/နီ
Posted: 22 Feb 2016 01:27 AM PST
တိုက်ကြီးမြို့နယ် တာခွကျေးရွာအုပ်စု ပိတောက်တန်းကျေးရွာ ရထားမိုင်တိုင်အမှတ် ၃၈/၉အနီး၌ မီးရထားသံလမ်းပေါ်၌ ယနေ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲက လူတစ်ဦးရထားတိုက်၍ သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ တိုက်ကြီးမြို့နယ် ပိတောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စုနေ မောင်ဝေလင်းထွန်း(၂၈နှစ်) (ဘ) ဦးစောမင်းသည် အရက်မူးပြီး ရန်ကုန်-ပြည်ရထားသံလမ်းပေါ်၌ အိပ်နေသဖြင့် တိုက်ကြီးဘူတာမှ ထွက်လာသော အစုန်အမှတ်(၇ဝ) သာရဝေါ-ကြ
Posted: 22 Feb 2016 01:09 AM PST
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့တွင် အသက် ၇ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးအား အဒေါ်ဖြစ်သူက မီးရှို့ပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သောကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မင်းပြားမြို့မ ရဲစခန်းက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မင်းပြားမြို့၊ ကံကော်မြိုင်ရပ်ကွက်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့က အသက် (၂၈)နှစ်အရွယ် အဒေါ်ဖြစ်သူက သူမထံမှ ငွေနှစ်ထောင်ကျပ် ခိုးယူသည့် အသက် ၇
နှစ်အရွယ် ပထမတန်းကျောင်းသူအား ရည်းစားစကား လက်မခံသည့် မိန်းကလေးကို ဓားဖြင့်ထိုးသတ်၊ ကိုယ်တိုင် အဆိပ်သောက် သေကြောင်းကြံစည်
Posted: 22 Feb 2016 01:03 AM PST
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ လိပ်အင်းရပ်ကွက်၊ ရွာဦးတာလမ်း၌ လူငယ်တစ်ဦးမှ ရည်းစားစကား ပြောဆိုရာတွင်မိန်းကလေးဘက်မှ လက်မခံသဖြင့် ဓားဖြင့်ထိုး၊ အဆိပ်သောက်၍ ကိုယ့်ကိုကို သေကြောင်းကြံစည်မှုတစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီ(၁၈)ရက်နေ့၊ နေ့လယ်(၁၁)အချိန်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မကာပီတာ(ခ)မအေးချို(၁၉)နှစ်၊သည် နေအိမ်၌စက်ချုပ်နေစဉ် ဆောင်းဒရားဆူး(ခ)စိန်ဝင်း(၂၄)နှစ်၊ မြလေးချောင်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်နေသူ မှ တော်ဝင်စင်တာတွင် အမျိုးသမီးတဦးအား ဓားဖြင့်ထိုးသွားသူကို ၎င်း၏မိသားစုများမှ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ လာရောက်အပ်နှံ
Posted: 22 Feb 2016 12:42 AM PST
ဒဂုံမြို့နယ်၊ တော်ဝင်စင်တာတွင် အရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးအား ဓားဖြင့်ထိုးကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသော ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အမျိုးသားအား ၎င်း၏မိသားစုများမှ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ လာရောက်အပ်နှံ
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂
၁၉.၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့ ၁၆၃၀ အချိန်ခန့်တွင် ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း အနောက်ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်း၊ တော်ဝင်စင်တာ ပထမထပ်ရှိ မျက်မှန် ဆိုင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော စမ်းချောင်းမြို့နယ်နေ အသက် (၂၀)နှစ်ခန့်ရှိ အမျိုး